Tiknolojiyadda ugu Wanaagsan ee loogu talagalay Kabaha Ammaanka iyo Kabaha | AIRTOX
COOL&ME® waa nidaam qaboojin heer sare ah. Nidaamka waxaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo wareegga hawada gudaha gudaha, iyo in la xakameeyo heerkulka iyo raaxada. Sababtoo ah dhisme microchannel laba-geesood ah oo u gaar ah, dhibco dhidid ah ayaa si joogto ah looga qaadayaa cagahaaga, uumi bax iyo cagahaaga oo qalalaya. Isla mar ahaantaana, hawo nadiif ah ayaa si fudud ugu gudbi karta marinka hoose. COOL&ME® wuxuu ka ilaaliyaa cagahaaga inay kululaadaan oo dhididku u kordho raaxada guud marka aad kabahaaga xiraneyso.
PowerBreeze® waa farsamadayaga casriga ah, dharka neefsashada loo adeegsado inbadan Airtox alaabta. Si ka duwan kan COOL&ME® nidaamka, PowerBreeze® waxaa loo isticmaalaa qaybta sare ee kabaha si loogu oggolaado hawo-goyn joogto ah. Microfabric-gu wuxuu ka caawiyaa maaraynta dhididka wuxuuna ilaaliyaa dareen qallalan markuu xirmayo kabaha. PowerBreeze® Waxay ku siinaysaa neefsashada oo sarreysa, oo kugu daaya dareenka kaabista dhabta ah markasta oo aad xirto Airtox.
WHITELAYER® waa wax aan ka yarayn dareen caalami ah, waxaana loo isticmaalaa gudaha Airtox markii ugu horeysay abid warshadaha kabaha badbaadada. Maqaarkan la jeexjeexay ee aan birta ahayn waa mid kacaan ku ah waxyaabaha ka hortagga daloolinta ee kabaha badbaadada. Waa mid aad u xoog badan, fudud, jilicsan oo fiber aad u sarreeya oo aan lahayn tartan dhab ah suuqa. WHITELAYER® waxaa asal ahaan lagu soo saaray usa ubaxyada ciidamada Mareykanka ee dharka xirashada. Tan iyo markaas, WHITELAYER® ayaa si habsami leh loo soo saaray Airtox industries galay lakabka ka hortagga daloolinta, ee ugu xoogga badan noociisa.
Waxay bixisaa ilaalin heer sare ah oo ilaalin ah cagahaaga deegaan kasta. WHITELAYER® wuxuu ku siinayaa xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo raaxada sare. Iyadoo gacan ka heleysa tiknoolajiyada sida WHITELAYER® , Airtox waxay awood u yeelatay inay xirto farqiga u dhexeeya tababarayaasha joogtada ah iyo kabaha badbaadada!
AQUA-CELL® waa xuubka noolaha ah ee nooc-ka-nooc ah oo sameeya AIRTOX kabaha badbaadada 100% biyuhu malaha. Waxay sifiican u shaqeysaa xitaa cimilada aadka u xun, iyadoo bixisa ka ilaalin roobka iyo xaaladaha shaqada qoyan. The AQUA-CELL® xuubka ayaa sidoo kale la neefsanayaa. Natiijo ahaan, AQUA-CELL® cagahaaga ka dhig mid qalalan oo cusub marwalba.
Tignoolajiyada nuugista shoogga Ultrasoft ee dhexda-solayaasha. Barkinta, soo celinta tamarta iyo dabacsanaanta hal mar. Aad uga jilicsan walxaha EVA caadiga ah.